Global Voices teny Malagasy » Hahaavotra ny iray amin’ny saha sisa an-tanandehiben’i Manila ve ny fiaraha-mamboly nataon’ny artista? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Novambra 2019 19:21 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fampandrosoana, Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna
Ao Filipina, misy vondrona artista sy volantera nanao tantsaha mba hamboly sombin-tany miorina ao anivon'ny faritra metropolitana  ao Manila ho anisan'ny fanentanana  isorohana ny fanesorana amin'ny taniny ireo mpamboly ny tany. Ity vondrona ity dia manandrateny hiarovana ny zon'ny tantsaha ao Filipina, fantatra ao an-toerana amin'ny anarana hoe SAKA, izay ao anatin'ny Fiarahan-dia amin'ny Fanajariana ny tany sy fampivoarana ny tontolo ambanivohitra marina tokoa.
Tao amin'ny antsafa niarahana tamin'ny mpanoratra, nohazavain'i Angelo Suarez mpitarika ny SAKA ny antony nanetsika ny vondrona hanomana izay antsoina hoe bungkalan, fiaraha-mamboly ny tany ao an-tanànan'i Quezon, iray amin'ny faritra 16 mandrafitra ny Metro Manila  izay manakaiky ny 13 tapitrisa ny isan'ny mponina ao aminy tao amin'ny fanisam-bahoaka farany tamin'ny taona 2015 . 
Ampahatsiahivin'i Suarez ny tantara  mifaningotsingotra amin'ity tany manokana ity: tamin'ny voalohany izy io tanim-pambolena, norombahina tamin'ny vondrom-piarahamonin'ny tantsaha izy io tamin'ny 1930s mba ho lasa zaratanin'ny fari-piadidiana vaovao an'i Quezon City. Niova indray ny satany tamin'ny 1950s rehefa nomen'ny governemanta ho an'ny Oniversiten'i Philippines Diliman (UP), oniversitem-panjakana voalohany tao amin'ny firenena.
Tsy nampiasaina ny tany nandritra ny dimampolo taona na dia teo aza ny fivelaran'i Quezon City haingana ho tanandehibe. Tany antenantenan'ny taompolo 2000s, nahomby tamin'ny fanangonan-tsonia tany amin'ny governemanta ny vondrom-piarahamonin'ny tantsaka mba hahatonga ny tany ho eo ambany fitantanan'ny programam-panavaozana ny fizakantany saingy notsipahan'ny UP izany filazaa izany tamin'ny ‘fampifandonana’ ny fiadidiana ny tanànan'i Quezon City amin'ny fitsipahana ny fanasokajiana ny tanety ho an'ny fambolena. Eo am-pikasana hanangana  ampahana parking eo amin'ny toerana ny UP.
Tsy mbola mazava aloha raha hahavaha ny fifanolanana ny lalàna  nosoniavin'ny Filohan'i Filipina Rodrigo Duterte tamin'ny Aogositra 2019 mamela ny UP hivarotra ny ampahan-tany fambolena amin'ny fiadidiana ny tanànan'i Quezon City. Saingy mahavotra tokoa ny fanombohan-draharaha tahaka ny bungkalan nokarakarain'ny SAKA hanaitra ny olona ny filàna hikojakojana io tany fambolena eo afovoan'ny tanànan'i Quezon City io, sy ny ifaharana manoloana ny fandrahonana hanesorana ny mponina ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/06/144502/
 faritra metropolitana: https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_Manila